Mapepa Anotengeswa muZimbabwe
Yako yega Essays Ekutengesa pasina kubhadhara kwakavanzika. Raira muZimbabwe tsika dzakatemwa kubva kuUK uye US vatauri vemo. 24/7 Tsigiro, Mahara Dzokororo uye yemhando yepamusoro inoshanda munguva pfupi
Kunyora Kwakakura Zvinyorwa Kutengesa
Kana iwe uine degree muChirungu uye uchida kuita imwe mari nekutengesa zvinyorwa zvekutengesa, ipapo ungangoda kufunga kutora kosi kana kutora kirasi mukunyora. Aya makosi uye zvirongwa zvinogona kukubatsira iwe kudzidza kunyora zvinonyengetedza zvinyorwa. Asi chii chinoitika kana hunyanzvi hwako hwekunyora husingaenzane?
Kune vadzidzi vazhinji, vanogona kupfuura nepakoreji vasina kunetseka nezvekuti vangatengesa sei zvinyorwa zvavo zvekutengesa. Nekudaro, kana iwe ukashandisa imwe yeaya masevhisi epamhepo, urikuzviitira iwe chikuru kufarira. Iwe unowana chimwe chinhu chakachipa kwazvo. Asi iwe unofanirwawo kubvunza kana izvi zvisati zvanyorwa zvinyorwa pane zvekutengesa masevhisi akavimbika? Aya mawebhusaiti kazhinji haana kuvimbika nekuti ivo vanowanzohaya vasiri-vazvirungu vatauri veChirungu, vazhinji vacho vasiri kana ivo vemuno muminda yavo.
Aya masevhisi eindaneti anowanzo bvunza mubhadharo ivo vasati vatanga kushanda pane ako magoogle. Kana ivo vakasabvunza, saka iwe unozoda kugadzirira kuburitsa imwe mari. Iko hakuna chakashata nekuchaja zvishoma, kunyanya kana iwe uchiziva kuti kune yakasarudzika mhando kune izvo iwe zvaunopa. Iwe uri kuda kubhadhara zvishoma kana iwe wapedza imwe nguva uchitsvaga izvo zvaunogona kusarudza. Uye, kana iwe wakamboita iyi tsvagiridzo kare, saka une chokwadi chekutsvaga kambani iri nani uye chibvumirano chiri nani pane dai usati wamboita chero tsvagiridzo zvachose!
Paunenge iwe wawana makambani akanaka, zvakakosha kuti unyore mapepa akanaka ekutsvagisa. Kana bepa rako rakanaka, rinotengesera iwe zvakanaka. Kana bepa rako risiri rakakura kudaro, vanhu vanowanzo kunzvenga iwe uye ako essays ekutengesa. Izvi zvinoreva kuti havazobhadharwe.
Usatombo kunetseka, zvakadaro. Kune makambani anozokupa iwe yakawedzera rubatsiro nemapepa ako ekutsvaga. Ivo vanozokutumira iwe zvinyorwa zvemapepa ako, kuti iwe ugone kuzvigadzirisa kuti uazvigadzirise uye kubvisa chero chinhu chisingabatsire kune yako yakazara hunhu.
Mitsara yekutengesa yave iripo kwemakore mazhinji. Ivo vari kuve vanozivikanwa zvakanyanya sevanhu vanova vanoziva nezve nzira yavanogona kuita mari kutengesa zvinyorwa online. Kunyangwe iwe uchigona kufunga kuti kutengesa zvinyorwa online kubiridzira, zviri pamutemo. Vanhu vakagadzirira kubhadhara mari kuti vawane rubatsiro kana vasingakwanise kuzviita vega. Uine izvozvo mupfungwa, unogona kubatsirwa nekumwe kutsvagisa kwaungave waita.
Kunyora chinyorwa chakanaka kunotora basa rakaoma. Zvinotora maawa ekushanda nesimba, asi zvinogona kunge zvakakodzera kukosha kana kunyora kwako kuchikupa mari yekuwedzera. Unogona zvakare kuishandisa sechishandiso chebasa rako, kunyanya kana uchikwanisa kunyora zvinyorwa zvinonyengetedza. Mitsara yakakosha kune chero munhu, asi avo vanonyora pamhando dzakasiyana dzemisoro vanogona kuwana nzira yavo muzvinyorwa.
Nhaurwa dzakanaka dzemhando yepamusoro dzinotengesa dzinogona kuita musiyano chaiwo muhupenyu hwako, uye nekutsvagisa chaiko, zvinogona kutokuwanisa basa muzvidzidzo. Saka kana iwe uchida kutengesa ako zvinyorwa zvekutengesa uye kuwana muhoro wakanaka, zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti tsvagiridzo yako ndeye yepamusoro notch uye iwe unoziva kunyora yakanaka chinyorwa.
Iwe unofanirwa kuve nekunzwisisa kwakajeka kwekuti munyori akanaka anofanira kunge akaita sei. Iwe unofanirwa kuziva kuti ndeupi rudzi rwechinyorwa chekunyora, kuti ingani mari yaunoshandisa pazviri, uye izvo zvinoda musika. Paunenge iwe uchinge waziva izvo zvinoda musika, zviri nyore kwazvo kunyora chinyorwa chinoshanda chinotengesa kana kudzidza kuti ndeapi mhando emakambani ekutsvagisa ekudzivirira.
Chimwe chinhu chekutsvaga munyori akanaka anozopa vimbiso pabasa ravo. Chivimbiso chivimbiso chekuti chigadzirwa chichava chakanaka. uye kuti ichatengesa. Kana iwe usinganzwe wakasununguka neizvi, enda kune inotevera kambani.
Mitsara yekutengesa inouya mumhando dzose uye hukuru. Mamwe mahara, uye mamwe anodhura. Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti kuwanda kwekutsvagisa kwaunoita, iwe unowedzera sarudzo dzaunenge uine paunenge uchisarudza imwe yekutengesa yako chinyorwa.